FromAndroid.net: Mashruuc cusub ayaa dhashay | Laga soo bilaabo Linux
Laga soo bilaabo Android.net: Mashruuc cusub ayaa dhashay
In kasta oo xaqiiqda ah in qaar ka mid ah akhristayaasheena ay noo soo jeediyeen inaanu sameysano hal domain oo wax looga qabanayo mowduucyada ku saabsan Nidaamyada Hawlgalka ee Mobilada, waxaan aaminsanahay inay fikrad fiican tahay in mowduucyada loo kala saaro mashaariic madax-bannaan sababo kala duwan awgood. Laakiin taasi su’aal maahan hadda.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo dhalashada Mashruuc cusub, oo si buuxda diirada u saaray isticmaalayaasha Green Droid: FromAndroid.net.
Mashruucani wuxuu barbar socon doonaa saaxiibkeen Alain, oo khibrad ballaadhan u leh Nidaamkan Hawlgalka iyo qalabkiisa kala duwan.
Mid ka mid ah ujeedada ugu weyn ee DesdeAndroid.net waa in la isu soo dhoweeyo dadka isticmaala cusub ee Nidaamkan Operating system, oo sii kordhaya maalin kasta xawaare aan la joojin karin.
Illaa iyo hadda maqaallo aad u xiiso badan ayaa la daabacay, qaar ka mid ah dabeecadda farsamada ee nagu hoggaamin doonta talaabo talaabo ah iyada oo loo marayo dayactir kala duwan, rakibid, cusbooneysiin iyo adeegsiga aaladaha. Dabcan, waxaad kaheli doontaa qaybo ra'yi ah oo dhaleeceyn sal leh loo aasaasay.
Dib uma dhigaayo qoraalkan. U fiirso naftaada:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Laga soo bilaabo Android.net: Mashruuc cusub ayaa dhashay
Waxaan rajeynayaa desdeios.net
Hagaag walaalkay, hadaad ceshato, gacanta ayaan dul saaraynaa xDDD
heshiis la dhammeeyay
Horeba! Aynu bilowno FromElav.net, FromGespadas.net, FromArenoso.net, iwm, iwm, iwm ... hehehe 🙂
Do_¬ MA jecli adiga ..
Yaaaa, ma qaadan kartid kaftan XDDD
IvánLinux iyo anigu waxaan daryeelaynaa miscellany-ka (hadaad ogtahay waxaan ula jeedo).
Hadda waxaan xasuustaa wixii ku dhacay elav.desdelinux.net mar dambe ma soo baxo ama si fiican uma xasuusto cinwaanka bartaada oO?
Hahaha maya, waa uun cilad yar in KZKG ^ Gaara ay tahay inuu xaliyo 😀
Mahadsanid walaal, waxaan rajaynayaa in mashruucu fulin karo shaqadiisa ugu weyn.
Xaqiiqdii haa! Kaliya waa inaad dareentaa sida oo kale 😛
Waxaan rajeynayaa inaadan ka tagin FirefoxOS ...
Maya, waxba yaan lagaa qaban mid uun kan kale, ha ka welwelin Fernando 😉
In kasta oo aan jeclahay magaca, haddana waxaan u arkaa inuu khalad yahay, maxaa yeelay wuu xaddidanayaa, waxaan u maleynayaa inay noqon laheyd mobiil lacag la’aan ah ama wax la mid ah maaddaama Android uusan noqon doonin OS-ga kaliya ee bilaashka ah ee casriga ah, sida Firefox OS, Ubuntu lafteeda, iyo kuwa kale .
Salaan iyo rabitaan wanaagsan dadaalkan cusub.
Marka laga reebo sababta oo ah khalad khaldan ayaa socda iyada oo aan H iyo kabaha Herradura la socon H, waan ku raacsanahay isaga.
Sameynta magac sida DesdeARM ama wax la mid ah ayaa ka sii ballaadhi lahaa. Uma qalanto in wax badan la eego sidoo kale, laabta dhabta ah. Sikastaba, waxaan u maleynayaa inaan heysano Android in mudo ah xD
Uta oo neceb run, waan saxaa, waad ku mahadsan tahay tilmaamida qaladka.
Sikastaba xaalku ha ahaadee adiguba qalad waad sameysay, marka laga reebo miyay wada jir tahay, mise waa wax bir ah 😉 Salaan
Waxaan rabaa waxaan rabaa waan doonayaa !!!
Waxaan codsanayaa FromWindows.net 🙂
Waxaa jira bogag aad u wanaagsan oo ku saabsan daaqadaha si mid kale looga sameeyo halkan, xD
Gaar ahaan haddii ay tahay inaad dhexdhexaad ka ahaato si dadku aysan u daabicin taxane, dildilaacyo, burcad-badeed kala duwan, feylasha cudurka qaba iyo waxyaabahaas things
Dhab ahaan, baloogyada Windows-ka guud ahaan waa noocaas.
Miyaanay fiicnaan lahayn inaad wacdid "fromwarez.net"? Oh sug! Waxaan noqon lahayn farabadan.
Waan daryeeli doonaa (iyo habka: eber warez).
Waxaa laga yaabaa inaan u muuqdo wax xanaaq badan, laakiin waxaan u maleynayaa taas iyadoo lala socdo "walaalka" mashruucyada ka soo baxaya "desdeLinux"; Marka lagu daro menu-ka weyn ee goobta, menu leh mashruucyada walaasha ayaa loo baahan lahaa.
Wax la mid ah bogga alt1040.com, uma maleynayaan inay sidaas yihiin. !! O_O
Ma ahan wax xanaaq leh gebi ahaanba, liddi ku ah. Isbeddeladani waxay ku imanayaan mowduuca xiga ee barta 😀
Haye wiil, maxaa fikrad fiican ah xD
Fikradda isku-darka dhammaan boggaga waa mid aad u wanaagsan laakiin waxaan u maleynayaa tixraaca inuu fiicnaan lahaa haddii wax la mid ah tuts + ay leeyihiin la isticmaalo
Ku jawaab rlsalgueiro
Miyaad eegi kartaa mawduuca RSS ee desdeandroid? Haddii aan eego usemoslinux / desdelinux waxaan helaa qoraalada oo dhameystiran, laakiin desdeandroid, waxaan helaa hal khad inta kalena waa la jaray. Waxaan qiyaasayaa inaysan ku jirin siyaasadaada, sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan ku helo aqristaheyda quudinta dhowaan!
Nasiib wacan mashruuca, si dhow ayaan ula socon doonaa
Dilaaga Tahuri dijo
Waxaan u maleynayaa inay tani tahay fikrad aad u fiican 🙂
Ku jawaab Tahuri Killer
Laakiin Android maahan barnaamij bilaash ah, Richard Stallman laftiisa ayaa sidaa leh.
Haddii aad leedahay Custom ROM, Gapska ha dhigin oo keliya barnaamijyada ka soo degso F-Droid waa (marka laga reebo ROMS-ka Shiinaha sida MIUI), marka laga reebo darawallada oo iska cad.
Heer sare Android waxay isticmaashaa Linux sidaas darteed way fiicantahay inay iyaguna ka hadlaan. Waxaan idiin rajaynayaa wanaag dhamaan dadaalkaan cusub.
Mashruuc kale? Way ila fiicantahay aniga… si kastaba ha noqotee waa inaan aragnaa sida seddexda mashruuc ay u wada horumariyaan iyo haddii aysan burburin bilaha sii socda. +1
Way fiicnaan laheyd in la dhigo bareeg sare oo tilmaamaya kuwaas oo ah baloogyada ka kooban mashruucyada la xiriira DesdeLinux ee qaabka Weblogs SL (Genbeta, Xataca ...), sidaas awgeedna waxaa si dhakhso leh u heli lahaa baloogyada la yiraahdo iyadoon loo baahnayn cinwaanka cinwaanka mid kasta oo ka mid ah baloogyada.
Waqtigan xaadirka ah, waan saxiixayaa.
Si buuxda u raac Elio.
Fikrad wanaagsan in lagu faafiyo dhammaan kala duwanaanshahaas oo leh xidid isku mid ah.
Isla taas. Sidan ayaan uga fogaaneynaa jahwareerka.
Waxaad ka hadlaysaa Green Droid oo sawirku waa buluug it Ma noqon kartaa inaan noqdo midab indhoole ah? LOL…
Dhab ahaan; Waxaan u maleynayaa inay tahay fikrad aad u wanaagsan waxaanan rajeynayaa inaan arko mawduuca cusub sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan ee leh xiriiriyeyaasha mashaariicda inteeda kale ... Iyo inay sii korayaan!
Waa war aad u fiican, waana run in maalin walba tirada dadka adeegsada Android ay sii kordhayaan mar walbana ay raadinayaan macluumaad hehehehe. Salaan.
Runtu waxay tahay in android uusan aniga i jeclayn wax badan, laakiin fikradda ayaa fiican. nasiib wacan mashruuca waana hubaa inaan hareeraha ka laadlaadayo akhriska maqaalladaada
Waxaan ka badanahay FromFirefoxOS.net 🙂
Hadana haddii aad i deg degto, Android waxaan ka door bidaa Replicant iyo OmniROM.
Maxaa ku dhacay mashruuca? Ma awoodin inaan ka helo blog ka andandroid.net 🙁
Ku jawaab pablox
Adeegga Tusaha ee LDAP : Isc-DHCP-Server iyo Bind9
ExMplayer: Ciyaaryahan Multimedia leh 3D taageero, Facebook iyo inbadan